Dowladaha Maraykanka iyo Kanada oo Soomaalida Koonfur Afrika Magan-galyo siinaya – Radio Daljir
Abriil 21, 2015 2:55 b 0
Talaado, Abriil 21, 2015 (Daljir) — Soomaalida ku nool dalka Koonfurta Afrika ayaa waxay ku sugan yihiin xaallad cabsi leh, iyadoo ay inta badan la kulmaan boob, dil iyo cabsi-gelin ku salaysan Isir-nacayb.
Welwelka xooggan ee haysta Soomaalida ku nool Koonfurta Afrika ayaa waxay badankooda nafta ku samir siiyaan inay mar ay ahaataba ka heli doonaan Dib-u-dejin dalalka Reer Galbeedka, gaar ahaan Maraykanka, Kanada, Sweden iyo Australia.
Afhayeennadda Xafiis-gobaleedka Hay’adda QM ugu qaabilsan Arrimaha Qaxootiga (UNHCR) ee dalka Koonfurta Afrika, Tina Geeli ayaa sheegtay inay dalalka Maraykanka, Kanada iyo Australia yihiin saddexda waddan ee bixiya Dib-u-dejinya ugu badan.
Waxay kaloo sheegtay inay jiraan Waddamo kale oo iyagana dib-u-dejin u fidiya Qaxootiga ku nool dalka Koonfurta Afrika, waxayna xustay inay muddo dheer oo ilaa saddex sanno qaadan karto inta Qaxootiga sugayo Jawaabaha codsiyadooda Dib-u-dejinta ah.
Afhayeenadda waxay sheegtay in xilligan oo ay Falal Isir-nacayb ah ka socdaan dalka Koonfurta Afrika inay Dowladaha qaabila Qaxootiga dedejin doonaan Codsiyadda dadka magangelyo-doonka ah.
Waxay kaloo carrabka ku dhufatay inay jirtay xilli ay Hay’adda UNHCR ka furteen Xafiis Gobalka Bariga Keeb, iyadoo ay markaasi socdeen falal Isir-nacayb ah oo si gaar ah loogu weeraray dadka Soomaaliyeed.
“Dib-u-dejinta ma aha wax hal habeen ku dhamaanayo, waxaan helaynaa codsiyo badan oo ka imaanayo dadka shisheeyaha ee dhibaatadda ku hayso Koonfurta Afrika” ayey tiri Afhayeennadda Xafiis-gobaleedka Hay’adda QM ugu qaabilsan Arrimaha Qaxootiga (UNHCR) ee dalka Koonfurta Afrika, Tina Geeli oo la hadashay Warbaahin laga leeyahay dalka Zambia.
Waxay intaasi raacisay in ay Hay’adda UNHCR sannadkan gudbisay 1,534 kiis oo shisheeyaha qaxootiga ku ah Koonfurta Afrika ku codsanayaan inay Dib-u-dejin ka helaan dalalka kale ee horumaray.
Dhinaca kale, Shabakadda Wararka ee www.bdlive.co.za ayaa qortay inay 1,206 qof oo qaxooti ku ah dalka Koonfurta Afrika sugayaan jawaabaha codsiyadooda Dib-u-dejinta ee sannadkan.
Sannadkii hore, 848 Soomaali ku noolayd dalka Koonfurta Afrika ayaa ka mid noqotay in ka badan kun qaxooti ah oo Dib-u-dejin ka helay dalalka Maraykanka iyo Kanada.